Must listen to this Observation by Hamza Borana of RDH and – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooMust listen to this Observation by Hamza Borana of RDH and
Akkuma beekamu qabsoon Oromoon waggoota dabran geggeessaa ture, diinagdee biyyattii dadhabsiisee akkasumas mootummaa fudhatama dhabsiise.
Namoota hin dubbisiniif : Dhimma kana ilaalchisee tilmaani keessan maal fakkaata? Furmaanni hoo? Haa Mari’annu!
Akkuma beekamu qabsoon Oromoon waggoota dabran geggeessaa ture, diinagdee biyyattii dadhabsiisee akkasumas mootummaa fudhatama dhabsiise. Haala kana keessatti Wayyaaneen aangoo siyaasaa dhabdee Dr. Abiy aangoo irra bahe. Amma ammoo Wayyaaneen erga aangoo siyaasaa dhabde booda, miidhaa qabsoon waggoota darban biyyattii irraan gahe jabeessuu fedhu. Biyyi daran akka kufaatii hamaa kuftu irratti hojjachaa jiraachuutu mul’ata. Tarsiimoo qabsoo nuti fayyadamaa turre Wayyaaneen deebiftee fayyadamuuf yaalaa jiraachuutu mul’ata. Mootummaan isaan harkaa waan baheef diinagdeedhaan mootummaa kuffisuu akkasumas mootummaan ummata biratti akka fudhatama hin arganne hojjachaa akka jiran gochoota isaanii irraa hubachuun salphaadha.
Amma mootummaa lamatu biyya bulchaa jira fakkaata. Caasaaleen mootummaa bifa wal fakkaataan hojiitti hin jiran. Qaama ummata dhaga’uu fi qaama ummata hin dhageenyetu jira. Kuni kan mul’isu hafteen caasalee ummata miidhaa turanii ammallee jiraachuudha. Caasaalee durii kan utubee qabe warra biyya kuffisuuf hawwu kana.
Qaama tokko jalatti buluu dhabuun ammoo mootummaa fudhatama dhabsiisee seer-dhablummaa fida. Gama kaaniin rakkoo diingdee hammeessaa deema. Kana keessa ummatatu miidhama. Miidhaadhaan sun ummataa fi mootummaa deebisee walitti buusa. Wayyaaneef ammoo karoora dantaa isaanii eegsisu waan ta’eef kuni akka ta’u jabeessitee hojjatti.
Karaan isiin ittiin jabeessitu keessaa baajata guddaa baaftee maallaqaan caasaalee mootummaa kana laamshessuudha. Akka haaromsi gareen Lammaa godhaa jiran hin milkoofne dantaa maallaqaatiin nama bitti. Hojiin namoota akkasii dantaa ummataa dhiisanii ummata miidhuun ummataaf mootummaa walitti buusuu irratti hojjatu. Namoota quuqama ummataa qaban ammoo akka sabaaf hin hojjanne sakaaluun hojii gufachiisu.
Gama biraatiin meeshaa nama hidhachiisuun saamichaa fi ajjeechaan akka raawwatu godhu. Kuni seer-dhablummaa jabeessuufi. Akkasumas weerara daangaa akka hammaatu godhu. Saboota walitti buusu. Nageenya biyyaa yoo hin eegsifne mootummaan ummata biratti fudhatama hin argatu. Kuni ummataa fi mootummaa walitti buusa jechuudha.
Gama diigdeetiin ammoo mootummaa laamshessuuf diinagdee harka isaanii jiru akka hin sochoone godhu. Akkuma beekkamu waggoota hedduuf diinagdee biyyattii kan dhuunfate Wayyaaneedha. Kaampaanonni gurguddaan harka isaanii jira. Kan biyya alaatii meeshaa galchuu fi kan biyya keessatti omishu hedduun kanuma jaraati. Kampaanonni jaraa hojii laafisuu fi dhiheessii hir’isuun diinagdee mootummaa miidha. Sharafa alaatis akka dhabamu godha. Kuni jireenyi akka qaala’u taasisuu malu.
Akkasuma oduun ‘Financial Times’ dhihoo baase akka akeekutti biyyi Chaaynaa Itoophiyaa keessatti investimentii adeemsisaa turte amma of duuba deebi’uu isiiti. Chaaynaan akka mootummaa ammaa irraa abdii dhabdu gochuu irratti Wayyaaneen hojjachaa jiraachuutu mul’ata. Duraanuu Wayyaanee fi Chasynaan wal ta’uun bifa saamicha fakkaatuun biyya teenya keessatti investimentii geggeessaa turuun ni beekkama. Amma yeroo adeemsi saamichaa sun sirreeffamuuf yaalamu, akka waan haalli itti jijjiirameetti amansiisu. Qabeenya isaaniitiif akka sodaatan gochuun investimentii irraa of duuba deebi’uutu mul’ata. Kuni ammoo sharafa alaa gama jaraatiin argamu xiqqeessa. Liqii Chaaynaa irraa argatan dhabsiisuu mala. Kunis jireenyi akka qaala’u godha.
Bifa kanaan shirri xaxamu kan ani hin ibsin hedduun jiraachuu malu. Ta’ullee rakkoolee sababa kanaan umaman furmaata itti kennuu kan qabu mootummaadha. Kanaaf itti gaafatamaan mootummaa waan ta’eef ummatni mootummaa komata. Yoo furmaata hin fidne ummataaf mootummaa walitti buusa.
Kanaafuu, hojii guddaatu yeroo gabaabduu keessatti bulchiin Dr. Abiy irraa eegama. Yoo rakkooleen as deeman dafee fulmaata hin arganne rakkoo hamtuu tilmaamuun nama rakkisutu as deemaa jira
Must listen: Iyyaafata Seenaa Oromoo - Master Hasan Abdulqaadir
Borana Night Agarsisa Aadaa Oromoo borana Gamme Nariobi 2019; Borana Songs
Borana Night Agarsisa Aadaa Oromoo borana Gamme Nariobi 2019; Borana Songs ﻿ ﻿ ﻿ ﻿…
BEAUTIFUL BORANA - OROMO CULTURAL SONG
BEAUTIFUL BORANA - OROMO CULTURAL SONG This folk song was performed by Ellebor primary school…